Trauma Center (2019) | MM Movie Store
မငျးသားကွီး Bruce Willis ပါဝငျထားပွီဆိုမှတော့ ဇာတျကားကောငျးတဈကားဆိုတာ ကြိနျးသနေပေါပွီ၂၀၁၉ ခုနဈထှကျ Thriller/Horror အမြိုးအစားဖွဈပွီး ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့…
လောလောလတျလတျမိခငျဖွဈသူသဆေုံးထားပွီးနောကျဆေးရုံတှကေို မုနျးတီးနတေဲ့ မကျဒီဆနျက စားပှဲထိုးအလုပျကိုလုပျရငျး ပနျးနာရငျကပျြရောဂါသညျ ညီမဖွဈသူအတှကျ ပိုကျဆံရှာရပါတယျ…တဈည ညဆိုငျးဆငျးရငျး လူသတျမှုတဈခုကို မကျြဝါးထငျထငျမွငျလိုကျရကာ တရားခံ သနေတျသမားရဲ့ကညျြဆနျကွောငျ့ ဆေးရုံရောကျသှားပါတော့တယျ….
ကံကောငျးထောကျမလို့ အသကျမသခေဲ့ပမေယျ့ မကျြမွငျသကျသကေို အပွတျရှငျးခငျြတဲ့ တရားခံတှကေလိုကျလာပွီး အသကျရနျရှာတဲ့အခါမှာတော့….သူမ တဈယောကျတညျးအသကျဘေးကလှတျနိုငျပါ့မလားဆိုတာကို အသညျးတယားယားနဲ့ကွညျ့ရှုခံစားရမှာပါ….
မင်းသားကြီး Bruce Willis ပါဝင်ထားပြီဆိုမှတော့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဆိုတာ ကျိန်းသေနေပါပြီ၂၀၁၉ ခုနစ်ထွက် Thriller/Horror အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့…
လောလောလတ်လတ်မိခင်ဖြစ်သူသေဆုံးထားပြီးနောက်ဆေးရုံတွေကို မုန်းတီးနေတဲ့ မက်ဒီဆန်က စားပွဲထိုးအလုပ်ကိုလုပ်ရင်း ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါသည် ညီမဖြစ်သူအတွက် ပိုက်ဆံရှာရပါတယ်…တစ်ည ညဆိုင်းဆင်းရင်း လူသတ်မှုတစ်ခုကို မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်လိုက်ရကာ တရားခံ သေနတ်သမားရဲ့ကျည်ဆန်ကြောင့် ဆေးရုံရောက်သွားပါတော့တယ်….
ကံကောင်းထောက်မလို့ အသက်မသေခဲ့ပေမယ့် မျက်မြင်သက်သေကို အပြတ်ရှင်းချင်တဲ့ တရားခံတွေကလိုက်လာပြီး အသက်ရန်ရှာတဲ့အခါမှာတော့….သူမ တစ်ယောက်တည်းအသက်ဘေးကလွတ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို အသည်းတယားယားနဲ့ကြည့်ရှုခံစားရမှာပါ….